ललिता निबास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन पुर्बमन्त्री भूमिसुधार तथा व्वस्था मन्त्री दलबहादुर राना समेत तानिने - MONGOL KHABAR
ललिता निबास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन पुर्बमन्त्री भूमिसुधार तथा व्वस्था मन्त्री दलबहादुर राना समेत तानिने
काठमाडौं । माघ २७, सोमबार, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा अब सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदसमेत यस विषयमा तानिने खतरा देखिएको छ । ललिता निवास परिसरभित्र विवादित जग्गामा बनेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को भवनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला र तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर राना समेत तानिने देखिएको हो ।
विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार त्यतिबेला जग्गा खरिद गर्नुअघि एनआरएनएले खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरण सहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको थियो । यो निवेदन पछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ बैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट रु. ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो । त्यसपछि विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भए पछि सम्बन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले यो जग्गा पास गर्दा एनआरएनएलाई राजश्व छुट गराउने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए र भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर राना थिए । अहिले यो जग्गा सरकारी भएको र अवैधानिक रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिएको खुलासा भए सँगै मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय समेत अवैधानिक हुने देखिएको छ । किनकि मन्त्रिपरिषदले जुन जग्गाको राजश्व छुट दिने निर्णय गरेको थियो त्यो जग्गा सरकार कै थियो ।
एनआरएनएले त्यो जग्गा यदि सरकार कै हो र कुनै व्यक्तिले सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी आफूहरुलाई झुक्याएको भएमा आफूहरु पीडक नभइ पीडित हुने जिकिर समेत गरेको छ । संघले यो जग्गा खरिदमा आफू पीडित भएको दावी गर्दै आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा र आफ्नो क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउने काममा सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ ।